မှတ်ပုံတင်ခြင်း | verification | accounts ကို | သိုက် | ထုတ်ယူ | ကန့်သတ် | စက်မှုလက်မှု | အထွေထွေမေးခွန်းများ
အွန်လိုင်း slot | အွန်လိုင်း Blackjack | အွန်လိုင်းကစားတဲ့
ကာစီနို Accounts ကို
သင်သည်သင်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုမေ့လျော့သို့မဟုတ်မရှိတော့ထို့နောက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကို access ကိုရှိပါက ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု team to have it reset.
Withdrawals by Wire Transfer haveaminimum limit of £/$/€50 or 500kr, all other withdrawal methods haveaminimum limit of £/$/€2.5 or 25kr. For more information on making withdrawals from your account, please see our အထဲက Cashing page.
သင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံအကောင့်သို့ရန်ပုံငွေသို့ပေးသွင်းရမည်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး ကာစီနိုစာရင်း section.
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်သိုက်ကန့်သတ်သတ်မှတ်နိုင်သည် ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအသင်း, They will be happy to setalimit for you.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cookie ကိုအသုံးပြုမှုမူဝါဒများနှင့်အခြားသီးသန့်တည်ရှိမှုသတင်းအချက်အလက်ပေါ်သတင်းအချက်အလက်ဘို့ငါတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး privacy ကိုစာမျက်နှာ.
If you are having difficulty accessing our casino games it may be that you are behindafirewall or that your computer does not meet the Minimum Specification to play our games. Try turning off any firewall software and ensure that you can access other sites on the internet to make sure you connection is working. If you are still having difficulties our နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုရေးအဖွဲ့ may be able to help.
သင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းပြီးတော့အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ဖောက်သည် Support Team သို့ and they will assist you.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည် မော်လ်တာဂိမ်းအာဏာပိုင်, License Number of MGA/B2C/231/2012 issued by Malta Gaming Authority on 16th April, 2013 and is licensed and regulated by the Gambling Commission, License Number 000-039335-R-319313-012.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်း အသုံးပြု. လက်ငင်း Chat ကိုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ဆက်သွယ်ရန်စာမျက်နှာ.
အခမဲ့ slot ဂိမ်း